Iindaba - "LUXMAIN" Ukunyusa ngokukhawuleza kukunceda utshintshe imodeli yomsebenzi
Kuluntu lwangoku, isantya sobomi siya sikhawuleza kwaye sikhawuleza, umgangatho weemoto uya usiya uzinza, kwaye kukho inkcazo entsha yolondolozo lweemoto. Iimoto ezingezizo ezengozi ngokubanzi azidingi kuya kwivenkile enkulu yokulungisa. Abantu bakhetha ukuya kwivenkile encinci yokulungisa okanye ukwenza ulondolozo ekhaya bebodwa. Abathandi be-DIY bathanda ukuphinda bahombise kwaye bahombise izithuthi ngokwazo. Nokuba yivenkile yasezidolophini okanye igaraji yosapho, indawo incinci, kwaye akunakwenzeka ukufaka ilifti enkulu yokulungisa izithuthi.
Emva kwexesha elide lophando, i-LUXMAIN iphumelele ngempumelelo encinci, engasindi kwaye ephathekayo yokunyusa imoto --- Ukuphakamisa ngokukhawuleza, okusombulula iingxaki zexesha elide ezikhankanywe ngentla ezihlasele abantu ngexesha elinye.
UkuKhawulezisa ukuKhawulezisa luhlobo lokwahlulahlula oluphathwayo. Inomzimba omncinci kwaye inokuphathwa ngokulula ngumntu omnye. Ikwaxhotyiswe ngamavili eenyawo anokuhamba ngokulula ngokutyhala kunye nokutsala. Ingakumbi ifanele usapho kunye nokulungisa ivenkile.
Ngoyilo lokwahlulahlula ukunyusa okukhawulezayo, inika indawo evulekileyo eyaneleyo ezantsi kwesithuthi ukukuxhasa ukulungisa ukumiswa, inkqubo yokukhupha kunye nokutshintsha ioyile.
Izakhelo zokuphakamisa kunye nesilinda seoyile ziyilo elingena manzi, elinokusetyenziselwa ngokukhuselekileyo ukuhlamba imoto.
Ukudibanisa iifreyimu ezimbini zokuphakamisa kunye neebholithi kwaye ubeke iqonga elikhethekileyo kuyo, kujika isinyusi sakho esikhawulezayo sibe sisithuthuthu. Yenza ukuba kube lula ukuba isixhobo esinye sibe nemisebenzi emibini yokuphakamisa zombini isithuthi kunye nesithuthuthu.
Iposi ephindwe kabini yokuPhakamisa okungaphakathi, Iselfowni ePost Post yokuPhakamisa imoto, Iposi ephindwe kabini yokuPhakamisa phantsi komhlaba, Ukuphakanyiswa kweMoto eNye ePhathekayo, Isiphatho seHydraulic Scissor seMoto, Isilinda esibambeleyo esinye,